အချိန်တိုအတွင်း အိမ်သန့်ရှင်းရေးဘယ်လို လုပ်မလဲ? - Phoenix Emperor
အချိန်တိုအတွင်း အိမ်သန့်ရှင်းရေးဘယ်လို လုပ်မလဲ?
Home / Blog / အချိန်တိုအတွင်း အိမ်သန့်ရှင်းရေးဘယ်လို လုပ်မလဲ?
သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့အိမ်မှာနေထိုင်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့သင့်တော်ယုံသာမ မိမိရဲ့ စိတ်ကိုကြည်လင်စေ ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ရဲ့အိမ်မှာ နေရတာဖုန်တွေထူပြီး မသပ်ရပ်တော့ဘူး သန့်ရှင်းမှုမရှိတော့ဘူး လို့ခံစားနေရရင် တစ်ရက်အတွင်း သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့အိမ်လေးကို အချိန်တိုတွင်းရရှိစေမဲ့ နည်းလမ်းတွေ ဖော်ပြပေးပါမယ်…
မနက်ပိုင်းမှာ တော့ ပထမဦးဆုံး အိပ်ခန်းနဲ့အိပ်ယာတွေကိုစတင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ အိပ်ယာခင်းတွေ ခေါင်းအုံးစွပ်စတာတွေကိုလျော်ဖွတ်ပြီး လှမ်းထားပါ။
ပြီးရင်တော့ မီးဖိုချောင် ဘေစင်မှာရှိတဲ့မဆေးရသေးတဲ့ပန်းကန်မှအစ ညစ်ပတ်နေတဲ့အရာတွေ ကိုဆေးကြောပါ။ မသန့်ရှင်းတဲ့ ဘေစင်နဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေရှိခြင်းက ကျန်းမာရေးကိုထိ ခိုက်စေပါတယ်။မိမိမှာအချိန်မအားလပ်သည့်တိုင်အောင် စားပြီးသား ပန်းကန် အသုံးပြုထားတဲ့ ပန်းကန်စတာတွေကိုချက်ချင်းဆေးကြောပြီး ပန်းကန်စင်ပေါ်မှာသပ်ရပ်စွာထားရှိပါ။
နေ့လည်အချိန်မှာတော့ တစ်အိမ်လုံးကို ရေဝတ်ဒါမှမဟုတ် Brush စတာနဲ့ ဖုန်တွေသုပ်ပေးပါ။ အဓိကနေရာတွေဖြစ်တဲ့ ရေချိုးခန်း အိမ်သာ နဲ့ မီးဖိုချောင်စတာတွေကို ဆေးကြောပြီး သန့်ရှင်းအောင်ပြု လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင်တော့ အိမ်တွင်း ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေမှာရှိတဲ့ ဖုန်နဲ့အညစ်အကြေးတွေကို သုတ်ပါ။
အိပ်ခန်းနဲ့ မီးဖိုခန်း ဧည့်ခန်း စတဲ့အခန်းတွေရဲ့ကြမ်းပြင်ကို တံမြက်စည်း လှည်းပါ။ ဖုန်စုပ်စက် အသုံးပြု တာကတော့ ဖုန်တွေသာမကပစ္စည်းအတိုအစအန တွေပါမကျန်ရှင်းလင်းပေးတာကြောင့် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဒီတခါမှာတော့ ခြင်းတစ်ခြင်းကိုလက်ကကိုင်ထားပြီး တအိမ်လုံးမှာရှိတဲ့ မလိုအပ်တော့ဘူးထင်တဲ့ အရာတွေကိုအရင်လိုက်သိမ်းပါ။ ခြင်းပြည့်သွားပြီး မလိုအပ်တာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ကြိမ် နေရာတကျမဟုတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းဆည်းပြီး သက်ဆိုင်ရာနေရာမှာထားရှိပါ။
အခုဖော်ပြတဲ့နည်းတွေအတိုင်းပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့ အိမ်လေးကို တစ်ရက် အတွင်း အမြန်ဆုံးရရှိမှာနော်။